Xoghayaha ururka KNUT oo guddiga TSC u qabtay muddo hal bil ah – The Voice of Northeastern Kenya
Xoghayaha ururka KNUT oo guddiga TSC u qabtay muddo hal bil ah
Star FM September 10, 2018
Xoghayaha ururka qaran ee ay ku bahoobeen macalimiinta dalka ee KNUT ahna xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr. Wilson Sossion ayaa guddiga adeega barayaasha ee TSC u qabtay muddo kama dambeys ah oo uu meesha uga saarayo wareegto ku saabsan dallacsiinta.
Sossion oo ka hadlay kulanka sanadlaha ah ee ururka KNUT oo ka dhacay ismamulka Kakamega ee galbeedka dalka ayaa sheegay in dallacsiinta macalimiinta la doonayo in lagu saleeyo shaqada ay hayaan.
Waxaa uu guddiga adeega macalimiinta ee TSC ku dhaliilay wareegto uu soo saaray 2-dii bishii shanaad ee sannadkan oo lagu sheegay in macalinka oo lookordhiyo heerka shaqo ay ku xirantahay waxqabadkiisa.
Mr. Sossion ayaa wareegtadaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aanan waafaqsanayn heshiis gorgortan ku saleysnaa oo ay saxiixdeen ururrada barayaasha iyo TSC.
Waxaa uu sido kale sheegay in go’aanka uu qaatay guddiga TSC uu yahay mid ku xadgudbayo nidaamka habboon ee wax lagu maamulo.
Xoghayaha KNUT ayaa sido kale carrabka ku dhuftay in macalimiinta dalka loo diiday in sannad kasta mushaar kordhin loo sameeyo.
Dowlada dhexe ayuu ku eedeyay inaysan soo saarin 5 bilyan oo shilin oo sida uu hadalka u dhigay ay macalimiinta xaq u leeyihiin in la siiyo.
Mr. Sossion ayaa wacad ku maray inuu ku baaqayo shaqa joojin qaran hadii muddo hal bil gudaheed ah guddiga TSC uusan waxba kama jiraan ka soo qaadin wareegtada ku saabsan hannaanka loo marayo dallacsiinta barayaasha.
Dhanka kale wasiiradda wasaaradda waxbarashada ee dalka Amina Maxamad ayaa sheegtay in la soo gabagabeeyay diyaar garowga ku aaddan maareynta imtixaanada qaran ee sannadlaha ah.
Waxay hoosta ka xariiqday in cidii lagu cadeeyo inay ku lug lahaatay xatooyo ama qish dhanka imtixaanada ah laga qaadayo tallabo sharciga waafaqsan.
Waxay shaaca ka qaaday in 17-ka bishan sagalaad la qaban doono kulan heer sare ah oo ay ka qeyb galayaan sarakiisha wasaaradaha waxbarashada, arrimaha gudaha iyo isgaarsiinta.
Shacabka kenyaanka ah gaar ahaan waalidiinta iyo ardayda ayay u xaqiijisay in dowlada ay sameynayso wax waliba oo karankeeda ah si imtixaanada ay u noqdaan kuwo ka madax bannaan wax isdaba marino.
Sido kale waxaa albaabada la isugu dhuftay 15 dugsi oo ku yaalo degaanka koonfurta ismaamulka Narok kadib qulqulatooyin dhanka amaanka ah oo halkaasi ka dhacay.
Rabshado isir ku saleysan oo u dhexeya laba ka mid ah qowmiyadaha degaankaasi ku nool ayaa waxaa ku dhaawacmay in ka badan 35 qof halka sarakiisha amaanka ay xabsiyada u taxabeen 29 eedeysanayaal ah.
← Kaaliyaha guddoomiyaha Migori oo maanta maxkamad la soo taagayo
Kiisaska dadka is dila oo ku badanayo dalka →